Ukuhlela kabusha i-imeyili: Izici ezi-6 ezidinga ukucabanga kabusha | Martech Zone
NgoLwesine, ngo-Okthoba 8, 2015 NgoLwesine, ngo-Okthoba 8, 2015 URichard Smullen
Kuya ngokuthi ubuza kubani, i-imeyili ibilokhu ikhona phakathi kweminyaka engama-30 nengama-40. Inani laso lisobala, ngezinhlelo zokusebenza ezihlanganisa zombili izici zenhlalo nezobuchwepheshe. Okubuye kubonakale, nokho, ukuthi ubuchwepheshe be-imeyili obuphelelwe yisikhathi bunjani ngempela. Ngezindlela eziningi, i-imeyili isakhiwa kabusha ukuze ihlale ihambisana nezidingo ezikhulayo zabasebenzisi banamuhla.
Kepha uvama kangaki ukubamba okuthile ngaphambi kokuvuma ukuthi mhlawumbe isikhathi sesidlulile? Lapho uqala ukuhlola izingibe ze-imeyili bese uthola izindawo ongathuthukisa kuzo, uqala ukubona ukuthi i-'e-mail 2.0 'ehluke kanjani uma ingakhiwa futhi yethulwe namuhla. Yiziphi izici ezizofakwa noma ezithuthukiswe? Futhi yini eyayizosala ngaphandle? Ingabe ukwakheka kwayo okusha kungaziboleka ezinye izinhlelo zokusebenza?
Ukube besingaphinda sisebenzise i-imeyili namuhla, nazi izisekelo eziyisithupha ezingasebenza njengengxenyekazi entsha ye-imeyili. Angazi ngawe, kodwa uma bengingasebenzisa lolu hlelo, ngizoba ikhempu eyodwa ejabule futhi esebenza kahle…
Awekho amanye amakheli e-imeyili
Amabhokisi ethu okungenayo agcwele ngokuphelele. Empeleni, ngokusho kweRadicati Group, I-imeyili engu-84% etholwe namuhla ingogaxekile. Ngoba lokhu kulula kakhulu: amakheli e-imeyili avulekile. Konke umuntu akudingayo ikheli lakho le-imeyili kanye 'ne-voila' - basebhokisini lakho lokungenayo. Ku-E-mail 2.0, kuzoba nohlelo olususelwa kwimvume olunokuhlonza okukodwa. Futhi lesi sikhombi sizohlala siyimfihlo njengenombolo yeselula yomuntu.
Ibhokisi lokungenayo lihambile
Lapho nje sesithole indlela 'yokukhomba' nemvume yabasebenzisi kahle, singasusa ibhokisi lokungenayo. Yebo, ibhokisi lokungenayo. I-E-mail 2.0 ibingasebenzela kangcono amabhizinisi namakhasimende uma 'ingxoxo' ngayinye noma umucu ngamunye womlayezo udlula uhlobo 'lokubamba konke' kwebhakede, aka ibhokisi lokungenayo. Ipayipi eliqondile phakathi kwebhizinisi namalungu alo abalaleli kungaba ngcono okwamukelwa kakhulu.
Imvelo evulekile yamakheli e-imeyili nenqwaba kogaxekile futhi kusho ukuthi sesiwajwayele amagciwane, imizamo yokweba imininingwane ebucayi kanye nemikhonyovu. Ngaphandle kobuqotho, noma yini kunaleyo 'engabuyiselwa emuva' ayivunyelwe. Ngakho-ke, nge-e-mail 2.0, singafuna ukwazi ukukhokha izikweletu, sisayine amadokhumenti ayimfihlo futhi sabele impahla yengqondo. Lokhu kungenzeka kuphela uma kuvulwa umzila ophephile, obethelwe ngokuphelele phakathi komthumeli nomamukeli ngaleyo ndlela kuqinisekiswe ukungala.
Ukuxhumana kwesikhathi sangempela nokuziphendulela
Uma uthumela umyalezo we-imeyili, kwenzekani kuwo? Ingabe ilahliwe, ibanjwe isihlungi sogaxekile, ifundwe, ayinakwa? Iqiniso lithi; awazi. Nge-imeyili 2.0, ukuziphendulela nokubika kuzoba phambili futhi kube maphakathi. Ngokufana nokuthi kusebenza kanjani ukuthumela imiyalezo, i-imeyili yethu yesikhathi esizayo izosuselwa kuzithunywa futhi ikhuthaze ukuxhumana kwesikhathi sangempela, nokuxhumana ngqo. Ihlala isebenza futhi isebenza kahle ngaso sonke isikhathi.
Ukukhula okusheshayo kweselula kusikisela ukuthi kungenzeka ukuthi yisikhathi sepulatifomu eyenzelwe kuphela ukusetshenziswa kwengqondo okusetshenziswayo. Impilo ihamba ngokushesha okukhulu kunakuqala eminyakeni engama-30 eyedlule kanti ngalokho, sekukhona ama-imeyili amade nemidwebo emihle ye-HTML engasebenzi. Abantu bakhetha ukuxhumana besebenzisa amagama ambalwa kuphela, imvamisa ngeplatifomu yengxoxo. Ngakho-ke i-imeyili 2.0 kuzofanele iqinisekise ukuxhumana okungcono; mfushane, ifike ngesikhathi futhi yakhelwe ukuthi ifundwe kuselula noma ngabe umamukeli ukuphi emhlabeni.
Yize lokhu kungabhekisa kokuningi ezimpilweni zethu, lokhu kubhekiswa kumafayili anamathiselwe kwi-imeyili athunyelwe ngendlela yethu. Umuntu waseMelika ojwayelekile usebenzisa cishe imizuzu eyisithupha ngosuku efuna okunamathiselwe namafayela. Lokho kuhumusha kube yizinsuku ezintathu zokukhiqiza okulahlekile ngonyaka. I-imeyili 2.0 akungabazeki ukuthi izokuqonda ukuthi ikuphi okunamathiselwe ebesikuthola futhi sikuphathe ngokufanele. Faka leli lapho, uhambise lelo lapha. Hlaba umkhosi lokhu ukuze ukhokhe njll.
Tags: imeyiliamakheli e-imeyiliokunamathiselwe nge-imeyiliukwakheka kwe-imeyiliukuhamba nge-imeyili
URichard Smullen uyi-CEO ye I-Pypestream. Phambilini ubesebenza njengomsunguli kanye nomphathi omkhulu weGenesis Media LLC, imithombo yezindaba eminingi yesizukulwane esilandelayo, ipulatifomu yokukhangisa ngevidiyo yangempela.
Indlela Yokulinganisa Impumelelo Yomphakathi Wezokuxhumana